Antivirus Software Free အကောင်းစား တွေကို မှ အနှစ်သက်ဆုံး ၊ အကြိုက်ဆုံးသူများ အတွက် အထူး စုစည်းထားခြင်း :) Avria Antivirus 2012 , Avira Internet Security 2012 - 2013 , Kaspersky Antivirus 2012 , Kaspersky Internet Security - 2013 , Kaspersky TDSS Killer 2.7.0.0 (Portable) , Kaspersky Remover v1.0.162 , Bitdefender Antivirus Plus 2012 ,BitDefender Internet Security 2012 (32 & 64)bit with Patch , Norton Internet Security 2012 OEM Edition , AVG Internet Security (2011) (Licence 2018) , Panda Internet Security 2012 , McAfee Internet Security 2011 (Full Version) , Avast Internet Security V7.0.1407 (2013 Key) , ESET Smart Security (2016 License Version) , Symantec Endpoint Protection , AntiVirus Uninstaller Tools , Microsoft Security Essentian (XP-SP2 , SP3 & Window-7 & Vista) ~ ITmanHOME
10:53 Antivirus total Collection, နည်းပညာ No comments
Antivirus Software Free အကောင်းစား တွေကို မှ အနှစ်သက်ဆုံး ၊ အကြိုက်ဆုံးသူများ အတွက် အထူး စုစည်းထားခြင်း :) Avria Antivirus 2012 , Avira Internet Security 2012 - 2013 , Kaspersky Antivirus 2012 , Kaspersky Internet Security - 2013 , Kaspersky TDSS Killer 2.7.0.0 (Portable) , Kaspersky Remover v1.0.162 , Bitdefender Antivirus Plus 2012 ,BitDefender Internet Security 2012 (32 & 64)bit with Patch , Norton Internet Security 2012 OEM Edition , AVG Internet Security (2011) (Licence 2018) , Panda Internet Security 2012 , McAfee Internet Security 2011 (Full Version) , Avast Internet Security V7.0.1407 (2013 Key) , ESET Smart Security (2016 License Version) , Symantec Endpoint Protection , AntiVirus Uninstaller Tools , Microsoft Security Essentian (XP-SP2 , SP3 & Window-7 & Vista)
Antivirus နဲ့ပက်သက်တာတွေဘာမှမတင်ဖြစ်တာကြာလာလို့ အခု Avria ကနောက်ဆုံး
ထွက်ထားတဲ့ Avria Antivirus Premium 2012 Full Version ကို သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက်မျှဝေ
ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်အရှေ့က Avria နဲ့ပက်သက်တဲ့ Post တွေမှာလည်း ပြောဖူးပါတယ်။ Avria ကတော့ Virus မှန်အမျှနဲ့ သူသံသယရှိတဲ့ File မှန်သမျှကိုတော့ အကုန်လုံးဆော်ပစ်တာနော်။
Crack တွေKeygen တွေတော့သတိသာထားကြပေတော့။
ပြီးတော့ တစ်ခုကျန်သေးတယ်ဗျ။ ဒီ avria က Window XPSP2 ကို Support မလုပ်ပေးပါဘူး။ XP sp3 , window server 2003 , Window7, Vista
တွေကိုတော့ Support လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အောက်က Link မှာယူသွားပါ
AVIRA ကိုမှ ယုံယုံကြည်ကြည်အသုံးပြုချင်သူများအတွက် တင်ပေးလိုက်ရခြင်း
ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။သူ့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုတော့ အချိန်ရရင်ရှင်းပြပေးပါ့မယ်။ သူက Kaspersky မသတ်
နိုင်တဲ့ autorun တို့ .exe တွေကိုတော့ အမှန်အကန်သတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သတ်တာကတော့ အစွမ်းကုန်ဘဲနော် တချို့ Virus လို့ယူဆတဲ့ Software တွေလည်း အကုန်လုံး ဆော် တယ် ဗျာ Free Version လေးဘဲတင်
ပေးလိုက်ပါတယ်။အောက်က Link မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
Avira AntiVir Premium 2012 12.0.0.818
ကျွန်တော်အခုတလော Antivirus လေးတွေဘဲတင်ဖြစ်နေပါတယ်။ အခုလည်း Avira Internet
Security 2012 လေးထပ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရှေ့မှာလည်း အခြား Version တွေတင်ထားပေးဖူးပါ
တယ်။ အခုက 2013key လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်း
တော့သတိထားဗျာ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Virus ကတော့ တော်တော်လေးကိုနိုင်နိုင်နင်းနင်းသတ်နိုင်ပါ
ဒါပေမယ့် Virus လို့ ထင်တဲ့ တချို့ Software တွေ ExE File တွေပါ အကုန်လုံးကိုသမတာဗျ။ကျန်
တာတွေအားလုံးကောင်းပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Kaspersky ချစ်သူများအတွက် Kaspersky Antivirus 2012
Kaspersky Antivirus 2012 နောက်ဆုံးထွက် Version လေးပါ။ KAV 2011 လိုမျိုး
Key က Block မဖြစ်ပါဘူး။အာမခံပါတယ်။ key တွေကတော့ တစ်လတစ်ခါ လောက် သက်တမ်းကုန်ပါ
တယ်ဗျာ။ အောက်က Link မှာလည်း အသစ်ထွက်တဲ့ Key တွေကို Update ဒေါင်းလို့ ရမယ့် Link လေးထည့်ပေးထားပါတယယ်။
အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးပဲ အဆင်ပြေကြ ပါစေဗျာ။
ဒါကတော့ Key လေးပါ။
Key များကို Up to Date လိုချင်ရင်
တစ်ခုတော့ကြိုတင်သတိပေးပါရစေ။ အထက်ပါ Link လေးကိုသွားချင်ပါက Kaspersky ကို ပိတ်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Kaspersky ကိုမှယုံယုံကြည်ကြည် အသုံးပြုနေတဲ့သူငယ်ချင်းများအတွက် အခုနောက်ဆုံးထွက်
လာတဲ့ Kaspersky Internet Security 2013 ကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ အထဲမှာလည်း Key ထည့်သွင်းပုံကို Notepad နဲ့ရော ပုံနဲ့ပါရှင်းပြပေးထားပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော့်အကြိုက်ဆုံး Antivirus နဲ့ မသုံးချင်ဆုံး Antivirus ကိုပြောပါဆိုရင်တော့ Antivirus ပါဘဲ။ အကြိုက်ဆုံးက တော့ Viurs တွေကို နိုင်
နိုင်နင်းနင်းနဲ့ နှိမ်နင်းပေးနိုင်လို့ပါဘဲ။ မသုံးချင်ဆုံးဆိုရင်တော့ တခြား Antivirus တွေထက် အသုံးပြုရတာ
နည်းနည်းလေးပိုလေးပါတယ်။ ဒါကြောင့် အခုတင်ပေးလိုက်တာကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် မစမ်းသပ်ဘဲတင်
Kaspersky ကတော့တကယ့် License Version
ကအကောင်းဆုံးပါဘဲဗျာ။ ဒါလေးကလည်း License Version ၀ယ်ဖို့အဆင်မပြေသူတွေအတွက် မျှဝေပေး
တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ Key ကိုလည်း ကျွန်တော့် Site ရဲ့ Home Page မှာ တင်ပေးထားပါတယ်ဗျာ။ စိတ်ပါ
၀င်စားသူများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Kaspersky Antivirus အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ Kaspersky ကို မသုံးချင်တော့လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် Uninstall လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ အဆင်ပြေပြေနဲ့ Uninstall လုပ်
နိုင်ပြီး တချို့ကြတော့အဆင်မပြေတာတွေ ဖြစ်တက်ကြပါတယ်။ အဲဒီအခါမျိုးတွေမှာအခုကျွန်တော်တင်ပေး
ထားတဲ့ Kaspersky Remover လေးကိုသုံးပြီး Remove လုပ်လိုက်တာနဲ့ အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်
မယ်။အသုံးပြုနည်းကလည်းလွယ်ပါတယ်။ kavremover.exe ကို Double Click နှိပ်လိုက်ပါ။
ကွက်မှာပေါ်နေတာစကားလုံးလေးတွေကို အောက်မှာ မှန်အောင်ရိုက်ပေးပါ။ ပြီးသွားရင် AVP Tool Driver အကွက်မှာ အောက်ဆုံးမှာရှိတဲ့ <Remove all known Products> ဆိုတာကိုရွေးပြီး Remove ကိုနှိပ်
လိုက်တာနဲ့Kaspersky ကို အမြစ်ပါမကျန် ရှင်လင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်မယ်ဆိုရင်အောက်က
Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Bitdefender Antivirus Plus 2012 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အရှေ့မှာလည်း
Bitdefender တွေကိုအခြား Version တွေတင်ပေးဖူးပါတယ်။ အခုလည်း ဒီ Version တွေ့တာနဲ့ မျှဝေပေး
လိုက်တာပါဗျာ။ ပြီးတော့ ဒီ Antivirus လေးက 2012 မှာ အကောင်းဆုံးလို့ သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကောင်
လေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါအပြင် နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာတစ်ခုက 38နှစ်စာ Crack လေးပါထည့်ပေးထားပါ
32bit နဲ့ 64bit ဆိုပြီး နှစ်မျိုးခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။ အခုပေးထားတဲ့ Link တွေကတော့
ကိုဝင်ကမ္ဘာကျော်ထံမှ ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာ။
Bitdefender Antivirus Plus 2012 (32bit)
Bitdefender Antivirus Plus 2012 (64bit)
သုံးကြည့်ချင်သူများအောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Norton Internet Security 2012 OEM Edition v19.0.0.128 (For 500 days approximately)
Norton ကိုမှ သုံးချင်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။ရက်ပေါင်း 500 အသုံးပြုနိုင်မှာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘာတွေကောင်းလည်း ဘယ်လိုအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေ ရှိလည်းလို့တော့ မှရှင်းပြတော့ပါဘူးဗျာ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့
ရတာ တစ်ခါမှမသုံးဖူးသေးဘူးဗျ။ ဟဲဟဲ။ အောက်က Link မှာယူကြပါနော်။အားလုံးဘဲအဆင်ပြေ ကြပါစေဗျာ။
Norton Internet Security 2012 OEM Edition v19.0.0.128
Crack NIS 2012 (For 500 days approximately)
AVG ကိုမှ ယုံကြည်စွာသုံးနေတဲ့သူတွေအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ ကျွန်တော် ခဏလေး စမ်းသုံးကြည့်တာတော့ ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Window XP , Window7, Window Vista သုံးမျိုးလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ လိုင်စင်သက်တမ်းက တော့ 2018 အထိအ
သုံးပြုနိုင် ပါတယ်။ အောက်က Link မှာ ဒေါင်းယူကြပါနော်။ အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေ။
AVG Internet Security (2011)
ကွန်ပြူတာတစ်လုံးမှာမရှိမဖြစ်ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Software ကတော့ Antivirus
ပါဘဲ။ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာ Antivirus တွေကိုစုံစုံလင်လင်တင်ထားပေးပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့ Antivirus တွေကို
လည်းကျွန်တော်တင်ဖို့ကျန်နေခဲ့ရင် ကူညီပြီးထောက်ပြပေးစေချင်ပါတယ်ဗျာ။ အခုတင်ပေးလိုက်တာလေး
ကတော့ Panda Internet Security 2012 ပါဘဲ။ ကျွန်တော်ကတော့ မသုံးပါဘူး။ မကြိုက်လို့မသုံးတာမ
ဟုတ်ပါဘူး မသုံးဖြစ်သေးတဲ့သဘောပါ။ ဒီ ကောင်လေးကိုလည်း လျှော့တွက်လို့တော့မရပါဘူး။
List တွေထဲမှာတောင်ပါတယ်ဆ်ိုတော့ တကယ်ကောင်းလို့ပါတာပေါ့ဗျာ။ အသုံးတည့်မယ်ဆိုရင်အောက်
McAfee Internet Security 2011 လိုချင်သူများအတွက်တင်ပေးလိုက်တာပါ။
အောက်က Link မှာဒေါင်း ကြပါနော်။ အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
McAfee Internet Security 2011 Cracked DLL
1. Disable access protection (from Navigation > General settings and alerts - last option )
2. Kill or end process mcagent.exe and McSvHost.exe from Task Manager .
3. Copy mcsubmgr.dll and paste to this path :
Agree to Replace it
4 Run Mcafee now and click fix it .
! Do not worry if you see subscription 0
program work like charm you can install all features.
The Crack is working fine with all McAfee Products ~
-McAfee® AntiVirus Plus 2011
-McAfee® Internet Security 2011
-McAfee® Total Protection 2011
Please just DON'T Register
ကွန်ပြူတာ အသုံးပြုနေတဲ့ သူတွေအားလုံး Virus အန္တရယ်ကိုတော့ ကြောက်ကြရပါ
တယ်။ တော်တော်များများလည်းကြုံတွေ့ဖူးကြပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီအချိန်တွေမှာ မိမိ အားသန်တဲ့ Antivirus
ကိုအသုံးပြုပြီးဖြေရှင်းကြရပါတယ်။ ကျွန်တော်အခုတင်ပေးတာကတော့ Avast Internet Security လေးဘဲ
ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးထွက် Version လေးမို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။ လိုင်စင်ကလည်း 2013 အထိအသုံးပြု
License Key ထည့်သွင်းပုံကလည်း အခြား Antivirus တွေနဲ့မတူဘဲ လွယ်ကူရိုးရှင်း
လွန်းပါတယ်။ License Key ထည့်မှာလား Trial Version နဲ့ Install လုပ်မှာလားမေးတဲ့အခါမှာ အထဲမှာ ပါပြီးသား Key လေးကိုဘဲ ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါဘဲဗျာ။ သူလည်းသူ့အစွမ်းအစနဲ့သူတော့ ကောင်းတာပါဘဲ။ Avast ကိုဘဲစွဲစွဲမြဲမြဲအသုံးပြုနေကြသူများနဲ့ စမ်းသုံးကြည့်ချင်သူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါ
တယ်ဗျာ။ဒေါင်းရအဆင်ပြေအောင်လည်း Link နှစ်မျိုးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေ
မိမိတို့ ကွန်ပျူတာ ကို Virus တွေ ၊ Spyware တွေ ၊ Trojan တွေ Computer , Network , Web and E-Mail တို့မှဝင်ရောက် ခြင်းတွေကို ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ ဒီကောင်လေးက မိမိတို့ကွန်ပျူတာကို ၀င်ရောက်လာတဲ့ Span Mail တွေ Link တွေကို Block လုပ်ပေးနိုင်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ URL တွေ IP Address တွေကအစ ဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ် အောက်က Link မှာသာ ဒေါင်းကြပါနော်။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
အခုတင်ပေးလိုက်တာကတော့ Antivirus Uninstaller Tools လေးတွေကို စုစည်း
ပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Kaspersky , AVG , Avria , Notorn , Avast , BitDefender , ESET Smart , အစရှိတဲ့ နာမည်ကြီး Antivirus Uninstaller အပြင် အခြား အမျိုးအစား စုစုပေါင်း 38 မျိုးထိပါဝင်ပါတယ်။
ဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးတည့်လည်းလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တို့ Antivirus တွေကို
သုံးနေတဲ့အခါမှာ License ကြောင့်ဘဲဖြစ်ဖြစ် Virus ကိုက်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ်
ချင်လို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ၊ ရှိပြီးသား Antivirus ကို Uninstall လုပ်ပြီး နောက်ထပ်တစ်မျိုး ထပ်တင်ကြပါတယ်။ အဲ
ဒီအချိန်မှာ တချို့ Antivirus တွေဟာ တစ်နေရာရာမှာကျန်နေတက်ပြီး သူ့အလိုလို Run နေတက်ပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ်လည်း နောက်ထပ်တင်မယ့် Antivirus ကို လက်မခံပါဘူး Control Panel ထဲမှာလည်း မရှိ
Program File ထဲမှာလည်းမရှိ ဖြစ်နေတက်ပါတယ်။Antivirus အပြောင်းအရွေ့တွေမှာ တော်တော်လေးကို
လည်း ပြသာရှာတယ်ဗျ။ အဲဒီ ပြသာနာတွေကို တော့ ဒီ AntiVirus Uninstaller လေးက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါ
Uninstall လုပ်ပုံကို အနည်းငယ် ရှင်းပြချင်ပါတယ်။ Autorun လေးကို Double Click
ပြီးဖွင့်လိုက်ပါ။စစချင်း Russian Language နဲ့ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဆို ဘယ်ဘက်မှာ English Language
လေးကိုနှိပ်ပြီး Language ပြောင်းလိုက်ပါ။ ဒါဆိုအဆင်ပြေပါပြီ။ ပြီးတော့ ကိုယ် Uninstall လုပ်ချင်တဲ့
Antivirus အမျိုးအစားကိုရွေးပြီး Uninstall လုပ်လိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင်တော့ Antivirus ဟာ မိမိကွန်ပြူတာက
နေ အစအနမကျန်အောင် ပျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလောက်ဆို အဆင်ပြေလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
အောက်မှာ Link သုံးမျိုးပေးထားပါတယ်။ အဆင်ပြေတဲ့ Link ကနေသာ ဒေါင်းကြပါနော်။ အားလုံးဘဲအ
AntiVirus Uninstaller Tools
Microsoft Security Essentian (XP-SP2 , SP3 & Window-7 & Vista)
Microsoft Security Essentials လေးကိုကျွန်တော် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ။ဒါလေး
ကိုတင်တော့ တချို့လူတွေကတစ်မျိုးပြောလာနိုင်ပါတယ်။ Microsoft က Free ပေးထားတာကြီးကိုအပိုလုပ်
ပြီး တင်တယ်ဆိုပြီး ဝေဖန်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Microsoft က Free ပေးထားတာကြီးကတော့ Window XP SP2 မှာ လုံးဝသုံးလို့မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့်ဘဲ MMiTD က ကျွန်တော် သူငယ်ချင်တစ်ယောက်က MSE
ကို SP2 မှာသုံးချင်တယ်ပြောလို့ ဒီPost လေးကိုတင်ဖြစ်သွားတာပါ။ SP2 မှာသုံးဖို့အတွက် ကျွန်တော် File
တစ် File ထည့်ပေးထားပါတယ်။
WindowsXP-KB914882-x86-ENU.exe File လေးပါ။ အဲဒီ File လေး
ကို Double Click နှိပ်ပြီးမှ mseinstall.exe ကို နှိပ်ပြီး Install လုပ်ပေးပါ။ ဒါလေးက SP2 အတွက်သီးသန့်
ပါ။ SP3 ,7, Vista တွေကတော့ တန်းပြီး mseinstall.exe ကို နှိပ်ပြီး Install လုပ်ရုံပါဘဲ။ ကျွန်တော်အ
ကြိုက်ဆုံးတစ်ချက်က ဒီကောင်လေးက လိုင်စင်မလိုဘူးဗျ။ ဘယ်လိုမလည်း Microsoft ကထုတ်ထားတော့
Microsoft ကထုတ်ထားတဲ့ window တွေဖြစ်တဲ့ XP ,7, Vista တွေမှာ Free ပေးထားတာပေါ့။ နောက်
တစ်ခုက တခြား Antivirus တွေနဲ့ မတူဘဲ အရမ်းကိုပေါ့ပါးလွန်းပါတယ်။ ရှိလို့ရှိမှန်းတောင်မသိဘူးဗျာ။ ဒီကောင်လေးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သုံးထားလို့ သိရတာပါ။ ကျွန်တော်စက်က Viurs တွေကိုက်နေတာ တစ်ပတ်အတွင်း Window ကို 7ကြိမ်တိတိ ပြန်တင်ရပါတယ်။ အဲဒါလည်းအဆင် မပြေပါဘူး နောက်ဆုံးဒီကောင်လေးကို စမ်းသုံးကြည့်တော့မှဘဲ အားလုံးအဆင်ပြေသွားတာပါ။ စိတ်ပါဝင်
စားတယ်ဆိုရင်တော့အောက်က Link မှာဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ အားလုံးဘဲအဆင်ပြေကြပါစေနော်။
Special Credit to Ko Pyae Phyo
အောက်ဆုံးထိဆင်းကြည့်ပြီး အပေါ်ပြန်တက် ကြည့်သောအခါ
You might also like: ကြောင့်မမြင်ရသောအခါ F5 or Reload Page or Refresh လုပ်ပေးပါ။ ( အပေါ်မှအောက်သို့သာ အစဉ်တိုင်းသာကြည့်၍ ရပါသည် ) :P
တခြား သူငယ်ချင်းတွေလည်း သိအောင် ရှယ်ပေးပါ